XASAASI:-Shaki Soo kala dhex galay Hey’adaha Amaanka & Halka ay ka yimaadeen labada gaari ee isku qarxiyey Otto Otto? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XASAASI:-Shaki Soo kala dhex galay Hey’adaha Amaanka & Halka ay ka yimaadeen labada gaari ee isku qarxiyey Otto Otto?
Ahmed weheliye Gaashaan 8 July 2018
Muqdisho ( Mareeg News ) Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay weerar ay maleeshiyaadka Al-shabaab ku qaadeen xarun ay wada deganaaayeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana hallkaasi ka dhashay khasaare kala duwan.
Xogtu waxa ay intaa kusii dareysaa in gaariga labaad oo ahaa nooca loo yaqaan Saaruf oo ka imaaday dhanka Isgooska Dabka waxa uuna daba socday gaari nooca dagaalka ee looyaqaan Cabdi-bilaha kaa oo lagu qarxiyay afafka hore ee Hoteel Sayid, iyadoo ay khasaaro kasoo gaartay ciidamadii la socday gaariga dagaal oo qabar moog ahaa.
Gaariga labaad ayaa la xaqiijiyay inuu kasoo baqoolay Degmada Howlwadaag, sida ay xogta sheegeyso waxaa gaarigaasi waday dhagarqabe aad u da’ yaraa, sida aan xogta rasmiga ah ku heleyno.
Ciidamada amaanka ayaa ku dhawaad Seddex bil ku jiray heegan si looga hortago Qaraxyada iyo dilalka ay qorsheynayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab, hase yeeshaa weerarada ayaa inta badan dhaca xiliyada kala wareega ciidamada amaanka.
Somali MP condemns deaths 12 people in Mogadishu blasts
ERDOGAN oo Hantida si rasmi ah loo shaaciyey mana aamini doontid tiradeeda